အောင်ထွန်းဦး: ဘ၀ဇာတ်လမ်းလေး တစ်ပုဒ်
ကျွန်တော် ရုံးဆင်းလို့ ရုံးမှ အိမ်ကို ပြန်လာတိုင်း တွေ့မြင်နေကျ မြင်ကွင်းတစ်ခုရှိသည်။ အဲ့ဒါကတော့ ကျွန်တော်တို့ လမ်းထိပ်တွင် ရပ်ကွက်ထဲက ကလေးတစ်သိုက် ပျော်ရွှင်စွာ ဆော့ကစားနေခြင်းဖြစ်သည်။ ရုံးမှာ ပင်ပန်းလာသမျှကို ကလေးပေါင်းစုံ ပျော်ရွှင်စွာ ဆော့ကစားနေတာကို ကြည့်ရင်း ကျွန်တော် အပန်းဖြေလေ့ ရှိသည်။ အပူအပင်ကင်းမဲ့ပြီး ဘာဟန်ပန်မှ မရှိသော သူတို့လေးတွေကို ကြည့်ရတာ ကျွန်တော့်အဖို့ အလွန်ကြည်နူးဖွယ် ကောင်းလှသည်ဟု ထင်မ်ိသည်။ ဒီမြင်ကွင်းလေးသည် ကျွန်တော့်အဖို့ နေတိုင်း မရိုးနိုင်သော မြင်ကွင်းလေးတစ်ခုဖြစ်နေတော့သည်။
ဒီနေ့ မြင်ရတာ မြင်ကွင်းလေးက နည်းနည်းထူးဆန်းနေသည်။ ကလေးတွေ ကြားထဲမှာ ကျွန်တော် တစ်ခါမှ မမြင်ဖူးသည့် အသက် (၅) နှစ်အရွယ် ကောင်လေးတစ်ယောက်ကို ကျွန်တော်မြင်လိုက်ရသည်။ သူက ကလေးတွေ ဆော့ကစားနေတာကို အဝေးက ထိုင်ကြည့်နေသည်။ သူ့မျက်လုံးတွေထဲမှာ အခြားကလေးတွေနဲ့ အတူဆော့ချင်နေတဲ့စိတ်ကို ကျွန်တော်မြင်လိုက်ရသလို ၀မ်းနည်းပြီး အားငယ်နေတဲ့ အရိပ်အယောင်တွေကိုလည်း ကျွန်တော်တွေ့လိုက်ရသည်။ ကျွန်တော် ချက်ချင်းပဲ ကောင်လေးအနားသွားပြီး
"သားကို သူတို့က မပါခိုင်းဘူး.."
"ဟုတ်လား…. ဘာလို့လဲ….သားက ညစ်လို့လား.."
"မဟုတ်ပါဘူး…. သားနဲ့သားအမေက ပလတ်စတစ်ကောက်တဲ့သူတွေ မို့လို့တဲ့.."
ကျွန်တော် ပြောစရာစကားမဲ့သွားပြီး ဘာဆက်ပြောရမှန်းမသိဖြစ်သွားသည် ။ ကျွန်တော်တို့ရပ်ကွက်မှာ လူကုံထံ ရပ်ကွက်မဟုတ်သော်လည်း လူလတ်တန်းစားရပ်ကွက်ဖြစ်သည်။ သူတို့ ဒီရပ်ကွက်ထဲကို အသစ် ပြောင်းလာကြသူများ ဖြစ်လိမ့်မည် ထင်သည်။ ကောင်လေးက ကျွန်တော့်ကို ပြောပြီးသည်နဲ့ ကလေးတွေ ကစားနေတာကို ပြန်ပြီး ငေးမောနေလေတော့သည်။
ကျွန်တော်လည်း ကလေးတွေ ကစားနေတဲ့နေရာကို သွားလိုက်ပြီး..
"သားတို့..ဟိုးက ထိုင်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းကို ခေါ်ကစားပါလား.. သူက သားတို့နဲ့ ဆော့ချင်လို့တဲ့.."
"ဟာ… မဆော့ချင်ပါဘူး.. သူနဲ့ သူအမေက ပလတ်စတစ်ကောက်ကြတာလေ.. ကြည့်ပါလား.. ညစ်ပတ်နေတာပဲ.."
"သူလည်း သားတို့နဲ့အတူ ဆော့ချင်နေတာလေ.. ပါခိုင်းလိုက်ပါကွယ်.. သနားပါတယ်.."
"ဟင့်အင်း… သူပါရင် သားတို့ မဆော့တော့ဘူး.."
ကျွန်တော် စိတ်လျှော့လိုက်တော့သည်။ ဒီကလေးတွေကို ကျွန်တော် ဘယ်လိုမှ ပြောလို့ရမှာ မဟုတ်တော့..။ ဒီနေ့တော့ ကျွန်တော့်အဖို့ အပန်းဖြေနေကျ မြင်ကွင်းနေသည် အရင်လို ကြည်နူးစရာ မကောင်းတော့ပါလား..။
ကျွန်တော် ညက တော်တော်နှင့် အိပ်မပျော်..။ ကောင်လေးအကြောင်းကို စဉ်းစားမိပြီး ကောင်လေးရဲ့ မျက်နှာကိုပဲ မြင်ယောင်နေမိသည်။ ဒီညနေ ရုံးဆင်းရင် ကျွန်တော် ဒီကောင်လေးနဲ့ တွေ့ပြီး စကားပြောချင်သည်။ ဒါကြောင့် ရုံးဆင်းတာနဲ့ ကျွန်တော် သုတ်ခြေတင်ပြီး ထွက်လာခဲ့တော့သည်။ ထင်ထားသည့်အတိုင်းပင် မနေက နေရာမှာပင် ကောင်လေးက ကလေးတွေကစားတာကို ထိုင်ပြီး ငေးနေသည်။
"ဘာလို့ မတက်ခိုင်းတာလဲသားရဲ့..၊ သားကျောင်းတက်ပြီး ပညာတတ်ကြီးဖြစ်မှ အမေ့ကို လုပ်ကျွေးလို့ရမှာလို့ ပြောပြပေါ့.."
"သားက မနက်ဆို အမေနဲ့ လိုက်ပြီး ပလစ်စတစ် ကောက်ရတယ်လေ.. အမေက ကျောင်းမနေနဲ့တော့လို့ ပြောတယ်…"
ကောင်လေးဆီက ဘာသံမှ မကြား..။ ကျွန်တော် ဒီကောင်လေးကို ပိုစိတ်ဝင်စားသွားသည်။ စိတ်ဝင်စားသွားသည်ဆိုတာထက် သနားမိတယ်ဆို ပိုမှန်လိမ့်မည်။ ဒီတိုင်းဆို ကျွန်တော် သူ့အမေနှင့် တွေ့ဖို့ကြိုးစားရတော့မည်။
"ဦး..သားတို့ အိမ်လိုက်လည်ချင်တယ်… အလည်ခေါ်မှာလား.."
"ဟာ… တစ်ကယ်လား…ဦး တစ်ကယ်ပြောတာလား… ခေါ်မှာပေါ့.."
ကောင်လေးရဲ့ ရှားပါးလှတဲ့ အပြုံးကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့လိုက်ရသည်။ ဒီကောင်လေး အမြဲတန်း ဒီလိုပြုံးနေရင် ဘယ်လောက် ကောင်းမလဲဗျာ…။
"ဒါဆို အခု သွားမယ်လေ…"
"ဟုတ်… သားတို့အိမ်ကတော့ ညစ်ပတ်တယ်နော်…."
"ဦးတို့ အိမ်ဆိုရင် ပိုတောင် ညစ်ပတ်သေး…"
ကောင်လေး ပျော်ရွှင်နေတာကိုမြင်ပြီး ကျွန်တော်လည်း ပျော်ရွှင်မိသည်။ ပြီးတော့ ကောင်လေးက ရှေ့ကနေဦးဆောင်ပြီး ထွက်သွားသည်။ ကောင်လေးနဲ့ ကောင်လေးအမေက အိမ်ငှားနေခြင်းဖြစ်သည်။ ၁၀ပေ ပတ်လည်လောက်ရှိတဲ့ အခန်းပေါင်းများစွာ စီတန်းဆောက်ထားတဲ့ အခန်းငှားတွေထဲမှ တစ်ခန်းမှာ နေနေခြင်းဖြစ်သည်။
အခန်းထဲကနေ အမျိုးသမီး တစ်ဦးထွက်လာသည်။ ကျွန်တော့်ကိုမြင်တော့
"ဒီကောင်လေးရဲ့ အမေ မှတ်တယ်…"
"ဒီလိုပါ….. ကျွန်တော်က ဒီရပ်ကွက်ထဲကပါပဲ…. ဒီသားလေးကို ကျောင်းမထားသေးဘူးလား.."
"မဟုတ်ဘူးလေ…. ကလေးက ကျောင်းတက်ရမယ့်အရွယ်ရောက်နေပြီ… ပြီးတော့ သူလည်း ကျောင်းတက်ချင် နေတာလေ.."
"ဟဲ့အကောင်….. နင်က လူတစ်ကာကိုလှည့်ပြီး နင်ကျောင်းတက်ချင်တဲ့အကြောင်း လျှောက်ပြောနေတယ်ပေါ့ လေ… ငါက ကျောင်းမထားပဲနဲ့ နင့်ကို ခိုင်းစားတယ်ပေါ့လေ.. ငါက လူဆိုးမကြီးပေါ့ ဟုတ်လား.. အေး… နင်နာဖို့သာပြင်…"
အဆိုပါ အမျိုးက ကလေးကို မာန်မဲပြီး ရိုက်ဖို့ပြင်တော့သည်။
"မဟုတ်ပါဘူး..၊ သူက မပြောပါဘူး..၊ ကျွန်တော်က ကလေးကို ကျောင်းတက်စေချင်လို့ပါ…"
"ကဲ..ရှင့်အပူ မဟုတ်ဘူး..။ ကလေးကို ကျောင်းထားတာ မထားတာ ကျွန်မအလုပ်.. ရှင်ပြန်တော့…."
ကျွန်တော် ရှက်လည်း ရှက်မိသလို တော်တော်လည်း အံ့သြသွားသည်။ ဆက်ပြောလို့ မသင့်တော်မှန်း ကျွန်တော် သိလိုက်သည်။ ကျွန်တော် ဘာမှမပြောတော့ပဲ လှည့်ထွက်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော် ခြေလှမ်း နှစ်လှမ်းသုံးလှမ်းလောက်အရောက်မှာ နောက်ကနေ ပြေးလာပြီး ကျွန်တော့် ခြေထောက်ကို ငိုယိုပြီး လာဖက်နေတဲ့ ကောင်လေးကို မြင်လိုက်ရသည်။
ကျွန်တော် တော်တော်ကို ၀မ်းနည်းသွားသည်။ ကျွန်တော် ဘာမှမပြောရသေးခင် နောက်က အမေဖြစ်သူက ပြေးလိုက်လာပြီး သူ့သားကို ဆွဲခေါ်ကာ ၀ါးခြမ်းဖြားနဲ့ တစ်ဖြန်းဖြန်း တွယ်တော့သည်။ ပါးစပ်ကလည်း ဆဲဆိုသံတွေ မိုးမွှန်ပြီး "တက်ချင်သေးလား… အဲ့ဒီကျောင်းကို…" ဆိုပြီး တဖြန်းဖြန်းနဲ့ ရိုက်နှက်နေပါတော့သည်။ ကောင်လေးက အော်ဟစ်ငိုယိုပြီး အားကိုးတကြီးနဲ့ ကျွန်တော့်ကို ကြည့်သည်။ ကျွန်တော် မျက်ရည် မကျလာခင် အမြန်လှည့်ထွက်ခဲ့တော့သည်။
ဒီနေ့ ကျွန်တော် ရုံးနောက်ကျတော့မည် ထင်သည်။ ညက စာဖတ်တာ နည်းနည်းများပြီး အိပ်ယာဝင်တာ နောက်ကျတာကြောင့် နေမြင့်မှနှိုးသည်။ အမေပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ ထမင်းချိုင့်ဆွဲပြီး ရုံးသွားဖို့ ထွက်လာခဲ့သည်။ ရုံးမရောက်ခင် မြို့တွင်း တစ်နေရာမှာ ပလတ်စတစ်ကောက်နေတဲ့ ကောင်လေး တို့ သားအမိနှစ်ယောက်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။ ကျွန်တော့်ကိုမြင်တော့ ကောင်လေး မျက်လုံးထဲတွင် ပျော်ရွှင်သွားသည့် အရိပ်အယောင်ကို ကျွန်တော်မြင်လိုက်ရသည်။ ဒါပေမယ့် ချက်ချင်းပဲ မျက်နှာ ညှိုးကျသွားပြီး ကျွန်တော်နဲ့ မျက်လုံးချင်းလွှဲကာ သူ့အမေနဲ့အတူ ပလတ်စတစ်ကောက်တာကိုပဲ ပြန်လုပ်နေလေတော့သည်။
ကောင်လေးရယ်….. မင်းရှေ့ဆက်ရမယ့် ဘ၀ခရီးလမ်း…. သာယာဖြောင့်ဖြူးပါစေ လို့ ဆုတောင်းပေးရုံက လွဲပြီး ဦးဘာမှ မလုပ်ပေးနိုင်တာကို ခွင့်လွှတ်ပါကွာ…။
စာရေးသူ Aung Htun Oo ရေးခဲ့ချိန် 8:32 PM
ဇော်မင်း အောင် August 10, 2014 at 11:31 AM
အဲဒါပဲ... ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရဲ့ Real Life လေ။ အောက်ခြေလူတန်းစား ဘဝတွေထဲကို အထက်တန်းစားဆိုတဲ့ ဘဝင်ရူးတွေ တစ်ရက်လောက် နေရာချင်း လဲစေ့ချင်တယ်။ တကယ်ဗျာ... နေစရာမရှိတဲ့သူတောင် ကိုယ်ချင်းမစာ နေရာချမပေး နှင်ထုတ် အပိုင်သိမ်းသတဲ့။ ငါ...မ အစိုးရ။ ဖတ်ရင်း အတွေးလွန်ပြီး ပေါက်ကွဲသွားလို့ဗျာ။ ဆောရီး...။ အဓိက တရားခံက စားဝတ်နေရေးပေါ့ဗျာ။ အုပ်ချုပ်သူမှ မကောင်းပဲ။